Apple TV-ga soo socda wuxuu yeelan doonaa kontorool cusub oo fog. | Waxaan ka socdaa mac
Mark Gurman kaliya la daabacay in TV-ga soo socda ee Apple uu diiradda saari doono ciyaaraha isla markaana uu yeelan doono kontorool cusub oo fog. Si aad u tiraahdo uma baahnid inaad baratid fiisikiska jimicsiga. Waa laba bayaan oo ku dhaca culeyskooda.
Midka koowaad, maxaa yeelay isagoo ah qalab ku xiran telefishanka, waa "ku dhowaad" waa qasab in lagu xoojiyo awoodda uu u leeyahay inuu ciyaaro ciyaaro wanaagsan, xitaa inuu ka hooseeyo qalabka fiidiyoowga ee hadda jira. Iyo in Apple ay go'aansatay inay bedesho kan hadda jira gacanta fog, waa rasiid. Caruurtu mar hore ayay laba aniga iga jabeen.
Mark Gurman hada uun dhajiyay Bloomberg Ujeeddooyinka Apple ee ku saabsan waxqabadka cusub Apple TV sanadkii 2021. Qalabkan cusub ayaa la sheegay inuu leeyahay kontorool casri ah oo casri ah, processor-ka cusub ee gudaha ku jira, iyo inuu si aad ah u bartilmaameedsanayo kor u qaadista ciyaarta.
Waxa uu sheegay in sanadka soo socda, Apple ay qorsheyneyso Apple TV casri ah oo diirada saaraya ciyaaro badan oo hadda socda, hago casriyeysan iyo mid cusub processor ka awood badan iyo sawiro ka fiican. Wuxuu sheegay in isbadaladaasi ay hagaajin doonaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka Apple TV, laakiin qalabku waa inuu qaadaa boodbood kale oo weyn, oo la mid ah isbeddelkiisii ​​2015, si uu u sii ahaado tartan mustaqbalka fog.
Sharax in mid ka mid ah isbeddelada ku imaan doona kontoroolka fog ee Apple TV uu noqon doono is dhexgalka barnaamijka "Raadinta" ee macruufka. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha inay helaan aaladda hagta haddii aysan heli karin, oo la mid ah isku dayga inay la socdaan iPhone ama iPad lumay. Waxaa laga yaabaa in tan loogu daro U1 jab band ballaaran-ballaaran.
Warbixinno kale waxay muujiyeen in Apple ay tijaabineyso noocyada TV-ga Apple TV oo ay la socoto processor A14 gudaha. Apple TV-ga cusub wuxuu sidoo kale maamuli karaa ciyaaro gaar ah oo loo yaqaan 'Apple Arcade games' oo ka faa'iideysanaya fursadaas isla markaana aan la jaan qaadi karin moodooyinka Apple TV ee hadda jira.
Caddaynta cusbooneysiinta cusub ee TV-ga Apple ayaa in muddo ah hareeraha koodhka iOS ah. Iyadoo xanta joogtada ah ee ku saabsan soo saarista qalab cusub iyo saddex sano Tan iyo cusbooneysiintii ugu dambeysay, waxay umuuqataa inaan ugu dambeyn ku dhowaan karno inaan aragno Apple TV cusub mararka qaar 2021.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple TV-ga soo socda ayaa diirada saari doona ciyaaraha wuxuuna yeelan doonaa kontorool cusub oo fog